Dowladda Iran oo Israel ku eedeysay dilkii Seynisyahan u dhashay dalkaasi. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dowladda Iran oo Israel ku eedeysay dilkii Seynisyahan u dhashay dalkaasi.
Dowladda Iran oo Israel ku eedeysay dilkii Seynisyahan u dhashay dalkaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga ee Iran ayaa ku eedeynaya in Israel ay dishay Mohsen Fakhrizadeh oo ahaa Seynisyahankii ugu sareeyay Iran ee Nukliyeerka iyadoo adeegsaneysa qalabka tikniyoolajiyadda ee laga hago meelaha fog.
Sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Shamkhani wuxuu sheegay in shaki uusan ku jirin in Israa’iil iyo hay’adaheeda sirdoonka, Mossad, ay ka dambeeyeen weerarkaasi.
Sarkaalka ayaa yiri, “Israel ayaa dooneysay in ay disho Fakhrizadeh muddo 20 sano ah”, isaga oo intaa ku daray Isra’il ay weerarkaasi u adeegsatay xirfad casriyeysan iyo qaab cusub oo ah nuucyadii ugu dambeeyay.
Seynisyahankaasi oo la dilay maalinimadii Jimcaha ee la soo dhaafay ayaa ahaa khabiir dhanka Niyuklerka u qaabilsanaa dalka Iiraan,waxaana dilkiisa m arkii hore lagu sheegay in loo adeegsaday qarax uu dhaliyay gaari xamuul ah.
Previous article(DAAWO) WARKA KOOBAN EE SNTV 01.12.2020.
Next articleMadaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo Qaabiley Wefdiga Wasiirka Haweenka+(SAWIRRO).